Shiinaha Warshad Soo Celinta Tooska ah & Soosaarayaasha | Dingtaisheng
Xeerarka FDA iyo Shiinaha ayaa sameeyay xeerar faahfaahsan oo ku saabsan naqshadeynta iyo ka shaqeynta qiiqa uumiga, sidaa darteed in kasta oo aysan iyagu ku badaneyn xagga isticmaalka tamarta, haddana weli si ballaaran ayey u jecelyihiin macaamiil badan sababtoo ah codsigooda ballaaran ee ku jira bakhaarro badan oo duug ah. On hordhaca ah ee hubinta u hoggaansanaanta shuruudaha FDA iyo USDA, DTS waxay sameysay waxyaabo badan oo ku habboon xagga otomatiga iyo keydinta tamarta.
Qaybinta kuleylka labiska:
U hoggaansanaanta shahaadada FDA / USDA:
Fudud oo lagu kalsoonaan karo:
Bilowgii, uumiga waxaa lagu mudaa weelka dib-u-celinta iyada oo loo marayo dhuumaha faafiyaha uumiga, iyo hawo ka baxsiga iyada oo loo marayo hawo-mareenka. Marka xaaladaha iyo heerkulka labadaba ee lagu aasaasay geedi socodka ay si isku mid ah u wada kulmaan, geeddi-socodku wuxuu u sii socdaa wejiga-soo-noqoshada.Guud ahaan soo-noqoshada iyo wejiga jeermiska, wejiga dib-u-celinta waxaa ka buuxsama uumi qumman oo aan lahayn hawo hawo ah haddii ay dhacdo kuleyl kasta oo aan sinnayn qaybinta iyo nadiifin la'aan. Dhiig bixiyayaashu waa inay u furnaadaan dhammaan hawo-mareenka, soo-baxa, tallaabada karinta si uumigu u samaysan karo isku-dhaf si loo hubiyo isku mid ahaanta heerkulka.
Sharaabka (borotiinka qudaarta, shaaha, kafee): qasac qasacad
Khudaarta iyo miraha (boqoshaada, khudaarta, digirta): qasac qasacad
Hilibka, digaaga: qasac qasacad
Kalluunka, cuntada badda: qasac qasacad
Babyfood: qasac qasacad
Diyaar u ah in la cuno cuntada, boorashka: qasac qasacad
Cunnada xayawaanka: qasac qasacad
Hore: Dib-u-Celinta Biyaha
Xiga: Steam & Hawada Soo Celinta
Automatic Steam Dufcaddii Horizontal Retort
Mashiinka Steam Retort